विदेशमा रहेका नेपालीलाई खुसीको खबर; हवाई उडान खोल्ने तयारी : पहिले आन्तरिक त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/विदेशमा रहेका नेपालीलाई खुसीको खबर; हवाई उडान खोल्ने तयारी : पहिले आन्तरिक त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय !
विदेशमा रहेका नेपालीलाई खुसीको खबर; हवाई उडान खोल्ने तयारी : पहिले आन्तरिक त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय !
चैत ११ गते (लकडाउन) देखि हवाई उडानमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध चाँडै खुला हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहिले आन्तरिक उडान खोल्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताएका हुन् । त्यसपछि अगस्तको दोस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।संचारकर्मी सँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘हामीले अरु देशले कसरी उडान खोलिरहेका छन् भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यसको निगरानी गर्न भनेको छु । चाँडै नै आन्तरिक उडान खोल्ने गरी पूर्वतयारी गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने त्यसपछि मात्र खोल्छौँ ।’
उडान सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा विमान सेवा कम्पनीहरु बसेका छन् । उनीहरुले सरकारको निर्देशन कुरिरहेका बताएका छन् । बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जहाजमा यात्रुलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका छन । एयरलाइन्सको वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै बस्नेतले उडानका लागि बुद्ध एयर तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मास्क, स्यानिटाइजरसँगै शारीरिक दुरीलाई अवलम्बन गर्दै नियमित उडानको लागि तयार रहेको बुद्धले जनाएको छ । बुद्धले केही सातादेखि नियमित पूर्वअभ्यास पनि गरिरहेको छ । यस अभ्यासमा ग्राउण्ड स्टाफ, विमान परिचारिका, पाइलट, टेक्निकल टिमलगायत सहभागी छन् । कर्मचारीले प्रोटोकल अनुसारको तालिम लिएर आवश्यक पीपीई लगायत प्रयोगमा ल्याएका छन ।
ओलीलाई हटाउन नसकेपछि ठूला मिडिया प्रयोग गरेर नेपाल–चीनविरुद्ध दुष्प्र चार गर्दै भारत